Thola amaqhinga amahle kakhulu okukhulisa izinwele zakho | Bezzia
USusana Garcia | 10/06/2021 20:00 | Ubuhle, Ubuqili bezobuhle
Ezikhathini eziningi thina sigunda izinwele futhi cishe masinyane sifuna zikhule futhi ukuba nezinwele ezinhle futhi. Yize kulezi zinsuku izinwele zigqokwa kakhulu ngama-midi nokusikeka okufishane, kunabantu abaningi abafuna ukuthi izinwele zabo zikhule zibe nomhlwenga omude. Ngakho-ke sizobona amanye amaqhinga ukuze lezo zinwele zikhule ngokushesha futhi ngaleyo ndlela ziphinde zithole izinwele ezinde zokwenza izitayela zezinwele ezithakazelisayo.
Kukhona ezinye amaqhinga okukhulisa izinweleYize kufanele sikhumbule ukuthi izinwele zinobude obunqunywe ngokofuzo futhi nejubane lokukhula kwezinwele nalo lincike kumuntu ngamunye. Kepha ngaphakathi kwale mingcele singenza izinwele zikhule kangcono futhi sizisize zikhule okuthile ngokushesha futhi ziqine.
1 Ungalindeli izimangaliso
2 Qaphela lapho uwugeza
4 Thatha izithasiselo
Into yokuqala kufanele wazi ukuthi akufanele ulindele izimangaliso, ngoba ngokuvamile izinwele zawo wonke umuntu zithatha ukukhula futhi zikhule cishe isentimitha elilodwa njalo ngenyanga. Kepha ngaphakathi kwalokhu, singasiza njalo izinwele ukuthi zikhule ngokushesha okukhulu nangamandla amaningi. Kubalulekile ukungabi nethemba eliningi lokuthola umhlwenga ngesikhathi esifushane. Uma sinomcimbi futhi sifuna ukukhombisa izinwele singahlala sisebenzisa izandiso ezinkulu.
Qaphela lapho uwugeza
Ukuwasha kuyinto umkhuba okufanele sinikeze ukubaluleka kwawo kuwo. Ukugeza izinwele kubalulekile ukuze ikhule iphilile njengoba kususwa ukungcola esikhunjeni sekhanda, kepha ukuyigeza ngokweqile kungayilimaza futhi kulimaze isikhumba sasekhanda, kuze kuyibangele ukuthi iwe noma iphuke, kuyenze ibonakale imfishane futhi ingenampilo. Kufanele uyigeze nge-shampoo efanele, uma kunokwenzeka nge-shampoo yemvelo engawasusi amafutha ezinweleni zakho futhi engafaki abicah noma ama-parabens kwifomula. Geza izinwele ngobumnene endaweni yekhanda, uyeke insipho idonse iye emaphethelweni kodwa ngaphandle kokuzihlikihla.
El i-conditioner ne-mask kubalulekile ukuthambisa izinwele futhi unakekele ukuphela, okuvame ukoma okuningi kakhulu. I-conditioner kufanele isetshenziswe nsuku zonke lapho sigeza izinwele zethu, kepha imaski isetshenziswa kuphela ngezikhathi ezithile. Le mikhiqizo isisiza ukuthi sinakekele imikhawulo futhi siyivimbele ukuthi ingaphuli futhi yonakalise, okwenza izinwele zilahlekelwe yingxenye yobude bayo enqubeni.
IRosemary iwumkhiqizo osiza izinwele zikhule kahle ngoba zisiza ukwenza ngcono ukujikeleza kwegazi ekhanda. Uma ukusakazwa kuhle, inisela izihluthu zezinwele ezenza izinwele zikhule kangcono. Kukhona eminye imikhiqizo ene-rosemary kepha noma kunjalo ungenza ukumnika nesitshalo bese usebenzisa lawo manzi ukusikhipha isikhumba sakho. Kufanele ukwenze kaningana ngesonto ukubona ukuthuthuka. Ngaphezu kwalokho, lokhu kusiza izinwele ukuthi zehle kancane ngezikhathi ezifana nekwindla. Lokhu kuzosiza ukwenza ngcono ukujikeleza kwegazi futhi kwenze izinwele zikhule ngokushesha.
Uma izinwele zakho zingakhuli zihlale zikhona ngoba untula umsoco. I- Izithasiselo zezinwele zingaba usizo olukhulu ngezikhathi Iwela kuyo kepha futhi lapho ikhula khona, ngoba uma siyithatha ivame ukukhula ngamandla, ngoba inezakhi zomzimba ezidingekayo. Kunezithasiselo eziningi kepha cishe zonke ziqukethe izakhamzimba ezifana ne-zinc, uvithamini B, i-iron noma i-biotin, ngoba zonke zisiza ukwakheka nokukhula kwezinwele.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Amaqhinga okukhulisa izinwele
Ungasusa kanjani izinduna ngemuva